AMBOHIMARINA ANDRAMASINA Mitohy ny fanadihadiana an’ilay hita faty nisy namono
Nahitana fatina lehilahy iray tao Ambohimarina, distrikan’Andramasina izay lalana anelanelan’ity renivohitry ny distrika ity sy Behenjy Ambatolampy.
Ny manampahefana teo an-toerana no nampilaza ny zandary tao Andramasina, efa tamin’ny 4 ora sy sasany tolakandro. Niaraka tamin’ny dokotera izy ireo nizaha ifotony ilay vatana mangatsiaka. Araka ny fizahana ny razana nataon’ny mpitsabo ara-dalàna dia maty novonoina ilay rangahy. Nahitana diam-pamaky ny vatany. Ny lehiben’ny fokontany no nampilaza ny mpitandro filaminana, mialoha ny faran’ny herinandro teo. Maro ireo lalana mangingina amin’iny faritra iny izay mampifandray an’Andramasina sy Behenjy no mampatahotra ireo mponina any an-toerana, raha ny loharanom-baovao azo. Manamorona an’Ambohimarina sy Antanetibe, Vinany, Lambanandriana ary Amboanjobe no tena mampivarahontsana ireo mpandalo. Ireo mponina any amin’ireo tanàna ireo anefa mihevitra fa jiolahy avy any amin’ny faritra hafa no ahiana manatanteraka ny vono olona feno habibiana toy izao. Ny zandary ao Andramasina no mandray an-tanana ny tohin’ny raharaha. Mirohotra ny fanaovan-dratsy amin’iny faritra iny. Vao tsy ela koa no tratra ilay vehivavy nanary zaza teo Ambohimarina, Andramasina.